Andre Iniesta Oo Sheegay In Cesc Fabregas Uu Ugu Danbeyn Ku Laaban Doono Kooxda Barcelona | WWW.DARARWEYNE.TK
Andre Iniesta Oo Sheegay In Cesc Fabregas Uu Ugu Danbeyn Ku Laaban Doono Kooxda Barcelona
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Barcelona Andres Iniesta ayaa shaaca ka qaaday in kooxdiisa ay mar kale u dagaalami doonto horyaalka Spain, waxaana mar kale uu ku celiyay sida uu u doonayo in Cesc Fabregas uu xagaagan ku biiro Camp Nou.
Fabregas ayaa weli lala xiriirinayaa inuu ku laabanayo kooxdiisii hore, waxaana rajo laga qabaa in kooxda reer Catalan ay soo gabgabeeyaan heshiiskiisa xagaagan.
“Markasta waxaan sheegnaa, sida aan u maleyno Fabregas. Hadii uu yimaado waxaa uu inaga caawin doonaa inaan tayo sii yeelano” ayuu Iniesta u sheegay Sport.
“Waxaan la hadlay isaga dhowr jeer, waana heli doonaa jaceylka uu u qabo inuu yimaado Barcelona”
Hadafka kooxda Pep Guardiola ee xilli ciyaareedka soo socda ayaa ah sidiisii. Barcelona waxa ay qaaday horyaalka La Liga iyo Champions League, xilli ciyaareedkii 2010-11, Iniesta ayaana kalsooni ku qaba in koobab badan ay qaadi doonaan horyaalka cusub.
“Sannadka walba waa goonidiis, waana u dagaalami doonaa koobabka oo dhan. Maxaa i noo diidaya inaan helno sannadka kale oo fiican? Ujeedkeena ah inaan ku guuleysano wax walba waa halkiisa” ayuu yiri ciyaaryahanka khadka dhexe.
« Chelsea Oo Kordhineysa Lacagta Ay Ku Dalbaneyso Laacibka Tottenham Luka Modric.
Heshiisyada maanta dhacay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda: »